एकल ह्यान्डल किचनको नल पुल डाउन स्प्रे क्रोमको साथ
भान्साको नल, भाँडो फिलर नल, बाथरूम नल | WOWOW
बार सिंक नलहरू
भाँडो फिलर नल
एकल ह्यान्डल बाथरूम नल
डबल ह्यान्डल बाथरूम नल
नल सहायक उपकरण
लगईन / रेजिष्टर्ड
खोज साइट खोजी
घर / भान्साको नल / नल तान्नुहोस् / WOWOW एकल ह्यान्डल किचनको नल पुल डाउन स्प्रे क्रोमको साथ
WOWOW एकल ह्यान्डल किचनको नल पुल डाउन स्प्रे क्रोमको साथ
Amazon US अमेजन CA
यो भान्साको ट्याप व्यवसायिक र घर अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श हो।
यस गुणस्तरको भान्साको ट्यापहरू तान्नका लागि उच्च स्तरको सौन्दर्य अपील हुन्छ।
बाहिर तान्नुहोस् दुबै सुरक्षा र सजावट प्रदान गर्न सक्षम छ।
2310700C स्थापना निर्देशन
फिर्ता किनमेल कार्ट
सामान खरीद गर्नुहोस्
किचन मिक्सर ट्याप क्रोम २2310700१०XNUMX०० सी
एउटा भान्साको मिक्सर ट्यापले केवल तातो र चिसो पानी संयोजन गर्दछ। तपाई वास्तवमा दुई पानी प्रवाहहरु लाई ठीक आफ्नो आवश्यकता अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्छ। क्रमशः तपाईंलाई चाहिने पानीको तापक्रम प्रदान गर्न। पानीको तापमानलाई मिसाउने WOWOW को किचन मिक्सर ट्याप क्रोमको साथ एक्लो हातले गर्न सकिन्छ। लीभरले सजिलैसँग काम गर्दछ र पानी सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। दुबै तापक्रम र पानी आफै दबाव। तपाईंले तुरून्त नोट गर्नुहुनेछ कि यो लीभर उच्च गुणस्तरको सामग्रीबाट बनेको छ। जस्तो कि यो सजिलैसँग चल्दछ, र कुनै प्रतिक्रिया छैन, तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँ लामो आयु सहनशीलताको सुनिश्चित हुनुहुन्छ।
पानीको तापक्रम मिलाउँदा तपाईं तीन पानी कार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। टाउकोमा तपाईं फ्लो मोड, स्प्रे मोड, र एक्वा-ब्लेड मोड चयन गर्न सक्नुहुनेछ। एक्वा ब्लेड मोडले शक्तिशाली पानी जेट प्रदान गर्दछ, जसले तपाईंको भाँडाबाट र सबै फोहरलाई तुरुन्तै पखाल्छ। यो एक्वा ब्लेड मोड एक अनौंठो विधि हो जुन तपाईले धेरै किचन मिक्सर ट्यापहरूमा भेट्नुहुने छैन। स्प्रे मोड प्लेटहरू स्प्याटर-मुक्त कुल्ला गर्ने एक प्रभावकारी तरीका हो, र नियमित प्रवाह मोड उदाहरणको लागि पानीको साथ भाँडो भाँडाहरूमा एक उत्तम विकल्प हो। सबै पानी मोडहरूले तपाइँको पानी खपत मा अर्थव्यवस्था गर्न एक पानी बचत समारोह प्रदान गर्दछ। यस तरिकाले तपाईले आफ्नो अंश योगदान पुर्‍याउनुहुनेछ दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतहरूमा बचत गर्न। यसबाहेक, तपाईंले आफ्नो पानीको बिलमा यो नोटिस गर्नुहुनेछ, किनकि तपाईंले WOWOW को किचेन ट्याप मिक्सर क्रोमको साथ पानीको खपतमा %०% बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
उच्च-गुणवत्ता भान्साको मिक्सर ट्याप क्रोम
WOWOW यसको ग्राहकहरु लाई उच्च गुणवत्ता faucets प्रदान गर्न समर्पित छ। त्यसकारण WOWOW ले सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछ जुन सबै उद्योग मापदण्डहरू, ए-ब्रान्डको पनि अधिक गर्दछ। WOWOW मा हामी विश्वास गर्छौं कि उच्च-गुणवत्ताको साथ तपाईं बजारमा भिन्नता बनाउन सक्नुहुन्छ। एक पटक कसैले WOWOW को मिक्सर ट्याप अनुभव गरेपछि, ऊ वा उनी जीवनका लागि ग्राहक हुनेछन्। त्यसकारण हामी हरेक दिन हाम्रो ग्राहक आधार बढिरहेको देख्छौं। तपाईं हाम्रो नवीन अनुप्रयोगहरूमा हाम्रो उत्कृष्टता पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै नियोपरल एरेटर र उत्कृष्ट सतह इलेक्ट्रोप्लेटिting प्रक्रियाहरूका साथ faucets फिनिशिंग। हामी यो निश्चित गर्दछौं कि तपाईले हाम्रो उच्च-प्रदर्शन भान्सा ट्यापहरू लामो अवधिको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले पनि WOWOW मा हामी तपाईंलाई किचन मिक्सर ट्याप क्रोममा year बर्षे वारंटी अवधि प्रस्ताव गर्न डराउँदैनौं। अधिकांश नल ब्रान्डले केवल १-वर्षीय ग्यारेन्टी अवधि प्रदान गर्दछ। यो धेरै A-ब्रान्डहरूमा पनि लागू हुन्छ। एक भान्साको मिक्सर ट्यापको रूपमा सामान्य रूपमा पछिल्लो to देखि १० बर्ष सम्म, WOWOW मा हामी तपाइँलाई एक मानार्थ5बर्षे वारंटी अवधि प्रदान गर्न आश्वस्त छौं। यो अत्यधिक असामान्य हुनेछ यदि एक किचन मिक्सर ट्याप स्थापना भए पछि years बर्ष भित्र बदल्न सकिन्छ। र हामी त्यो पनि अस्वीकार्य फेला पार्नेछौं, विशेष गरी हाम्रो ग्राहकहरूको दृष्टिकोणबाट। तपाईं यसको परिणामहरूसँग किन व्यवहार गर्नुहुन्छ? यसैले हामी kitchen बर्ष भित्र राम्रो प्रदर्शन नगरेमा हामी किचन मिक्सर ट्याप बदल्छौं। कुनै समस्या बिना!
स्प्रे मिक्सर ट्याप तल तान्नुहोस्
भान्साको मिक्सर ट्याप क्रोमको आँखा पार्ने कार्यक्षमता यसको नवीन पुल-डाउन स्प्रे हो। तपाईं यस किचेन मिक्सर ट्याप क्रोमको स्प्रे हेडलाई सहजै तान्न सक्नुहुन्छ र लामो पानीको नली देखा पर्नेछ। यस पानीको नलीको साथ तपाईं कुनै पनि ठाउँमा तपाईंको भान्छाको सिink्क वा वरिपरि पुग्न सक्नुहुनेछ।
यो पानीको नली लचिलो सिलिका जेलबाट बनेको थियो, त्यसैले तपाईं सजिलैसँग सञ्चालनको लागि सुनिश्चित हुनुहुन्छ किनकि यसले सहजताबाट बाहिर तान्छ। र यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि, यो स्वचालित रूपमा पछि हट्ने छ किनकि तपाईंको कुञ्जी सिink कपाटमा अदृश्य रूपमा स्थापित गरिएको रेभिटी बलको कारण। पानीको नली पनि उच्च-गुणस्तरका सामग्रीहरूले बनेको छ। यस तरीकाले तपाईले लगाउने, टिप्ने वा चुहाउने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। यो सबै इन-वन किचन मिक्सर ट्याप क्रोम धेरै, धेरै वर्षहरूको लागि रहनेछ। यो ग्यारेन्टी हो जुन हामी तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न चाहन्छौं।
वाणिज्य उपयोग किचन मिक्सर ट्याप क्रोम
उच्च गुणवत्ताको कारण हामी हाम्रो भान्छाको मिक्सर ट्याप क्रोमको साथ प्रस्ताव गर्दछौं, यो भान्साको मिक्सर ट्याप अक्सर व्यावसायिक स्थानहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। रेस्टुरेन्ट र बारहरूमा भान्छाको उपकरणको उच्च प्रदर्शन यसको संचालन कार्यको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि एक भान्साको मिक्सर ट्याप खस्ने छ भने, यो व्यवसाय को लागी विनाशकारी हुन सक्छ। त्यसकारण, रेष्टुरेन्टहरू जस्तो व्यावसायिक स्थानहरू केवल उच्च गुणस्तरका सामग्रीहरूमा भर पर्न सक्छन्। यसको कारणले गर्दा, WOWOW मा हामीलाई यो थाहा पाउँदा इनामदायी लाग्दछ कि धेरै नेन्टरनेशनल रेस्टुरेन्टहरूले हाम्रो भान्साको मिक्सर ट्यापहरू कार्यान्वयन गरेका छन्। हामी प्रस्ताव गर्दछ गुणवत्ता को एक पुष्टि।
स्टाइलिश किचन मिक्सर ट्याप क्रोम
गुण र प्रदर्शन बाहेक, दुबै घर र रेस्टुरेन्टहरूको लागि, भान्साको मिक्सर ट्याप क्रोमले उच्च स्तरको सौन्दर्य अपील प्रस्ताव गर्दछ। पहिलो स्थानमा यसको उच्च चाप डिजाइन को कारणले शैलीसँग कार्यक्षमता जोड्दछ, किनकि तपाईं अझ सजीलो भान्साको सिink पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। WOWOW का डिजाइनरहरू बोल्ड डिजाइनहरू प्रस्ताव गर्न समर्पित छन् जुन कुनै पनि डिजाइन किचनमा फिट हुनेछ। यसैले WOWOW को भान्साको मिक्सर ट्याप क्रोम निश्चित रूपमा कुनै अन्य मिक्सर ट्याप जस्तो छैन। भान्साको मिक्सर ट्याप आधार शीर्ष मा संकुचित र तल मा फराकिलो छ। यस भान्साको मिक्सर ट्यापको स्टाइलिश कम्मर रेखा अधिक रमणीय छ र तपाईंको भान्साकोठामा केही शान्त छ। साथै जब तपाईं मिक्सर ट्याप घुमाउनुहुन्छ, डिजाईनले यसको भव्यता हराउनेछैन।
सबैमा, WOWOW को किचन मिक्सर ट्याप क्रोमले तपाईंलाई बजारमा प्राप्त गर्न सक्ने पैसाको सबैभन्दा ठूलो मूल्य प्रदान गर्दछ। र सबै भन्दा माथि, तपाईं एक स्टाइलिश र सुरुचिपूर्ण भान्साको उपकरण पाउनुहुन्छ जुन तपाईंको भान्छामा कुनै ध्यान आकर्षित गर्दछ, चाहे यो घर वा व्यापारिक हो। किचन मिक्सर ट्याप क्रोम-बर्षे वारंटी र5० दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीको साथ आउँदछ। यदि तपाईं भान्साको मिक्सर ट्याप क्रोम द्वारा विश्वस्त हुनुहुन्न भने, तपाईंलाई कुनै प्रश्न सोधे बिना यो हामीलाई फर्काउन तपाईं अनुमति दिनुहुन्छ। तपाईंले तुरून्त पूर्ण फिर्ती पाउनुहुनेछ। हामी हाम्रा उत्पादनहरूमा विश्वास गर्छौं र हामी विश्वास गर्छौं कि तपाईं हाम्रो भान्साको मिक्सर ट्याप क्रोम पनि मनपर्नुहुनेछ।
संक्षेपमा भान्साको मिक्सर ट्याप क्रोमका फाइदाहरू:
Any कुनै पनि भान्छामा एक वाह-कारक दिन्छ
। उत्कृष्ट मिश्रण सुविधाहरू
Water तीन पानी मोड
· पानी बचत सुविधा
· स्टाइलिश र सुरुचिपूर्ण डिजाइन
Clean सफा गर्न सजिलो र मर्मत गर्न सजिलो
SKU: 2310700 XNUMX१C विभाग: भान्साको नल, नल तान्नुहोस् टैग: डेक माउन्ट, किचन सिंक मिक्सर, कुञ्जी टाउको
21.65 x 11.02 x 2.76 इन्च
निर्माता द्वारा बन्द गरिएको छ
पुल डाउन स्प्रेयरको साथ किचनको नल / किचन सिंक नल
जिंक जस्ता धातु / स्टेनलेस स्टील / ब्रास
एकल-होल &3छेद; डेक-माउन्ट
उच्च चाप / Gooseneck
१-होल वा--होल inch इन्च डेक प्लेट कभरिंगको साथ
तीन मोड: स्ट्रिम / स्प्रे / पज
ह्यान्डल / लीभर प्लेसमेन्ट
बाँया वा दायाँ
जिंक मिश्र धातु
मिक्सर ट्याप / तीन पानी नियन्त्रण कार्यहरू
प्रोफाइल प्लग गर्नुहोस्
समावेश गरिएका घटकहरू
१x वाह वाह रसोईको नल (cm० सेमी सेतो र चिसो पानी होज, १.m मीटर उच्च तापमान दबाव प्रतिरोधक पीएक्स होज), सहायक उपकरण: रबर, गस्केट, नट, १x उपयोगकर्ता पुस्तिका, १x वजन, १x inch इन्च डेक प्लेट
WOWOW कमर्शियल पट फिलर ट्याप तेल रबड कांस्य
WOWOW पॉट फिलर नल स्टोभ क्रोम माथि छ
वाह फ्लैट किचन नल ब्रश निकल
WOWOW तेल कांस्य पट्ट फिलर वाल माउंट मलाथ
अमेरिकालाई सन्देश पठाउनुहोस्
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस थप्नुहोस्: G GREEN STE A, KENT, डोवर सिटी, डे, १ 8 19901 ० संयुक्त राज्य अमेरिका दूरभाष: (२१213) २ 290 ०-१० 1093 इ-मेल: বিক্রয়@wowowfaucet.com
अंतर्निहित सम्पत्ती अधिकार
प्रतिलिपि अधिकार © २०२०-२2020२ W वाह FAUCET INC। सर्वाधिकार सुरक्षित।
WOWOW FAUCET आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ
तपाईको मुद्रा चयन गर्नुहोस्
अमेरिकी डलरसंयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) डलर
CAD क्यानाडा डलर
हामीसँग कुराकानी गर्नुहोस्
ब्राउजि History ईतिहास